झापा गोल्डकपको उपाधि त्रिभुवन आमीलाई - Nepal Bahas Nepal Bahas
झापा गोल्डकपको उपाधि त्रिभुवन आमीलाई
प्रकाशित मिति : २७ फाल्गुन २०७५, सोमबार २०:३५
काठमाडौं । चौथो संस्करणको झापा गोल्डकप फुटबलको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ । झापाको डोमालाल राजवंशी रंगशालामा सोमबार भएको फाइनलमा घरेलु टोली झापा ११ लाई ५–३ गोल अन्तरले पराजित गर्दै लगातार दोस्रो पटक उपाधि हात पार्न सफल भयो ।
उपाधिसँगै आर्मीले १२ लाख ५० हजार पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । झापाले भने यस पटक पनि उपाधि जित्न सकेन । २२ औं मिनेटमा झापाका खेलाडीले आर्मीका कप्तान भरत खवासलाई फल गरेपछि डी बक्सबाहिरबाट पाएको फ्री किकलाई सन्तोष तामाङले गोल गर्दै आर्मीलाई अग्रता दिलाएका थिए ।
यसैगरी ३३ औं मिनेटमा भरत खवासले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाए । नवयुग श्रेष्ठले प्रहार गरेको बल किलियर गर्न नसक्दा खवासले जाली चुमाएका थिए । तर ४३ औं मिनेटमा झापा ११ ले एक गोल फर्काएको थियो ।
फ्रान्सिसले गोल गर्दै पहिलो हाफमा अग्रता दुई एकमा झारेका थिए । ५४ औं मिनेटमा झापाका लागि हेमन गुरुङले गोल गर्दै २–२ को बराबरीमा ल्याएका थिए । ७५ औं मिनेटमा नबयुग श्रेष्ठले गोल गदै आर्मीलाई ३–२ को अवस्थामा लगेका थिए ।
८५ औं मिनेटमा आर्मीका सन्तोष तामाङले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा आर्मीले ४–२ को अग्रता बनाउन पुगेको थियो । त्यसपछि पनि आर्मीले गोल थपेको थियो ।
टेकबहादुर बुढाथोकीले इन्ज्योरी टाइममा गोल थप्दै आर्मीलाई ५–२ को अवस्थमा लगेका थिए । अन्तिम समयमा झापा ११ ले थप एक गोल गर्दै अन्तर ५–३ मा झारेको थियो ।
#झापा गोल्डकप फुटबल
#डोमालाल राजवंशी रंगशाला
एन्फालाई प्रशिक्षक अल्मुताइरी र व्यवस्थापन हटाउन सुझाव
एन्फा चुनावः अध्यक्ष शेर्पाले भोलि उम्मेदवारी दिने
यू-२० साफमा नेपालले उद्घाटन खेलमा माल्दिभ्सको सामना गर्ने
महालक्ष्मी विकास बैंक २८ औँ बर्षमा प्रवेश
कामपामा स्थापितलाई उछिनेर सिर्जना दोस्रो स्थानमा, बालेन अग्रस्थानमा
आज ११ जना संक्रमित थपिदा थप १२ जना निको
अस्ट्रेलियामा आमनिर्वाचन हुँदै
कामपामा ८२,९२१ मतगणना हुँदा बालेन ३१०१५ मतसहित अग्रस्थानमा
देशभर ६८३ पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक, कांग्रेस ३०४ स्थान जितेर पहिलो स्थानमा
सशस्त्र मूख्यालयमा भाइरस पसेको आंशका, नियन्त्रण गर्न छुट्टै सेल गठन
सबैलाई समेटेर समृद्ध टोखा निर्माण गर्छु : नगरप्रमुख अधिकारी
लमजुङमा युरिया मलको अभाव हुँदा किसान मर्कामा
भब्य रुपमा अघि बढ्दै हिमाल सरसफाई अभियान २०२२ !
बारास्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गका अधिकांश पुल साँघुरो र जीर्ण, घण्टौँसम्म जाम
सार्वजनिक बिदाका दिन पनि उपत्यकाका अस्पताल खुल्ने
निर्वाचनमा गठबन्धन मूलभूतरुपमा सफल : अध्यक्ष दाहाल
कथा : चुनावी चौका !
गण्डकीमा दोहोर्‍याएर उम्मेद्वारी दिएका १९ उपप्रमुखः ७ जना हारे, १२…
काठमाडौंमा ५१ प्रतिशत मतगणना गर्न बाँकी, बालेन शाहको निरन्तर अग्रता